Vanim-potoana vaovao ho an’i Malezia, resy tamin’ny fifidianana ny antoko nitondra nandritra ny enimpolo taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 12:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Ελληνικά, 日本語, 한국어, 简体中文, 繁體中文, English
Vondrona Maleziana Bersih nandritra ny famoriam-bahoaka mitaky ny hanaovana fifidianana madio sy marina. Sary: Facebook
Taorian'ny 60 taona nitondran'ny antoko mpitondra tao Malezia, resy ny Barisan Nasional (BN) tamin'ny Fifidianana faha-14 (GE14) tamin'ny 9 May 2018.
Najib Razak no lohan'ny governemanta tantanan'ny BN izay nanana raharahan-kolikoly maro. Lasa vao mainka nalaza ratsy ihany koa i Razak rehefa niezaka nanafoana ny fitakiana tamberin'andraikitra sy mangarahara tamin'ireo fiampangana ho nanao kolikoly ireo.
Dr. Mahathir Mohamad, 92 taona, ankehitriny no mitantana an'i Malezia izay efa Praiminisitra nandritra ny 22 taona mandra-pahatongan'ny fisotroany ronono tamin'ny taona 2003. Niverina teo amin'ny sehatra politika indray izy hitarika ny antoko mpanohitra Pakatan Harapan (PH) hifampihaika amin'i Razak sy ny governemanta fiaraha-mitantana teo aloha efa notarihiny.
Naneho ny tsy fahafaliam-pon'ny ankamaroan'ny Maleaziana tamin'ny asa vitan'ny governemantan'i Razak ny valim-pifidianana farany tamin'ny GE14. Maro ireo mpisera Maleziana no nankalaza ny vaovaon'ilay valim-pifidianana manan-tantara:
Azonao inoana ve izany?
Tamin'ny 3.30 maraina ny faha-10 May 2018, tsy mpitondra antsika intsony ny Barisan Nasional. Ora vitsivitsy dia hanomboka hiposaka eny amin'ny faravodilanitra ny masoandro .
Tena mampihetsi-po… ho hitantsika i Malezia vaovao hiarahaba antsika.
Miandry antsika ny hoavy, andeha hatory aloha isika
Nahavita tantara androany
• Governemanta vaovao taorian'ny 61 taona
• Minisitra lefitra vehivavy voalohany eto Malezia
• nandresy ny kandidà zokiny indrindra (93 taona)
• nandresy ny kandidà tanora indrindra (22 taona)
Izany no fotoana voalohany indrindra nahitana ny mpifidy nirehareha teto!
Tamin'ny andro voalohany nandraisany ny asany, nisioka ny filoha vaovao:
Andro voalohany niasana …indray
Nivoady izy hanadihady ireo sampan-draharaha voarohirohy tamin'ny kolikoly. Nohamafisiny ihany koa ny fampanantenana nataony tamin'ny mpanohitra hanafoanana ny lalàna, ny hetra ary ny fandaharanasa namoretana.
“Ho foanantsika ihany koa ny lalàna namoritra sy tsy rariny. Hofoanantsika ny lalànan'ny vaovao faikany…” – Dr. Mahathir.
Nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fandresen'ny mpanohitra ny Malaysiakini, vohikalam-baovao tsy miankina iray :
Ity no andro nahitan'ny Maleziana ny herin'ny vatom-pifidianana.
Nahatonga azy ireo hivoaka maro mba handatsa-bato tamin'ny fifidianana manan-tantara faha-14 ny hatezerana manoloana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao.
Ity no fotoana voalohany nanatrehan'ny firenena fanovàna tamin'ny governemanta hatramin'ny nahazoana fahaleovantena avy amin'ny Anglisy tamin'ny taona 1957.
Nohamafisin'ny gazety ny fampahatsiahivana amin'ny governemanta vaovao ny fanavaozana maika ilaina ‘hanasitranana’ ny firenena :
Manomboka ny asa mafy ankehitriny. Tsy misy olona tokony ho tratran'ny alonalona fa afaka mamerina ilalana ny lò efa niorim-paka am-polony taona maro ny governemanta vaovao.
Ho an'ny firenena iray misara-bazana, mila fotoana ny fanasitranana ireo ratra ireo, ary ny hanorenana indray ny fifampitokisana ho an'ny Maleziana sy ho an'ireo andrim-panjakana maro izay tsy nahomby .
Nankalaza ny valim-pifidianana GE14 ihany koa ny Aliran, vondrona fiarahamonim-pirenena, raha sady nitanisa ny sasany tamin'ireo fanamby natrehan'ny governemanta vaovao:
Miarahaba ny vahoakan'i Malezia izay nitsangana, nisedra ny sakana nianjady tamin'izy ireo ny Aliran ary nampiasa ny vatom-pifidianany mba hanatanterahana izany. Miarahaba ihany koa ireo vehivavy sy lehilahy maro izay niasa (maro tamin'izy ireo no nandritra ny am-polotaonany maro) tamin'ny niezahany nanao ny fanentanana ilaina ho an'ity fanovana ity izahay.
Manambara ny herin'ny vahoaka ny vokatry ny fifidianana nitondra fanovana. Manerana izao tontolo izao, nametraka ohatra tsara i Malezia – dia ny amin'ny Herin'ny Vahoaka sy ny amin'ny fiovana governemanta milamina.
Tokony hiasa amin'ny fandravana ireo rafitra maro nitana ny kolikoly teo amin'ny fahefana nandritra ny fotoana ela ny PH. Midika ihany koa izany, ankoatra ny zavatra hafa, ny fampihenana ny fahefana mpanatanteraka ary ny famerenana amin'ny laoniny ny andrim-panjakana hafa izay voaloton'ny fitsabahana ara-politika.
Mamintina ny fihetseham-pon'ny maro andro iray taorian'ny GE14 manan-tantara ity sioka ity :
Na dia nahazo ny fandresena aza ny PH, tsy hisy ny fanovana avy hatrany. Mbola maro ny zavatra tokony hapetraka mba hahafahantsika manam-paharetana mandrapahavitan'izany. Ndao hifantoka amin'ny fihazonana ny fandriampahalemana sy ny fibanjinana ny hoavin'i Malezia tsara kokoa .